Ukufakwa FSX / Xplane sur HDD Dans une ukumisa SSD avec
Umbuzo Ukufakwa FSX / Xplane sur HDD Dans une ukumisa SSD avec
unyaka 1 9 edlule #126 by gerod
Ngiyabonga beaucoup de Vos conseils.
unyaka 1 9 edlule #128 by Gh0stRider203
Sawubona. Okwamanje ukuthumela ku-English kuphela Forum. Ungathola Forum isiFulentshi, lapha:
Bonjour. Vous publiez actuellement sur le iforamu zu Anglais uniquement. Vous pouvez trouver le Forum Français, Ici: www.rikoooo.com/fr/forum/
(Translation nge-google ngakho uma okungalungile ukusola kwabo)
Isikhathi ukudala page: 0.257 imizuzwana